Beesha Caalamka oo Taageertay Heshiiskii Madaxda Soomaalida ee Baydhabo | SAHAN ONLINE
Beesha Caalamka oo Taageertay Heshiiskii Madaxda Soomaalida ee Baydhabo
MUQDISHO- Bayaan wadajir ah oo ay Beesha Calaamku soo saareen maanta ayaa lagu sheegay in; Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, Midowga Yurub, IGAD, Itoobiya, Talyaaniga, Norway, Sweden, Britain iyo Maraykanka ay si aad u weyn u soo dhaweynayaan natiijooyinka qiimaha leh ee ka soo baxay shirkii Golaha Amniga Qaranka ee 03 illaa 05-tii bishan Juun ka dhacay Baydhabo, magaalo madaxda Dowlad-goboleedka Koonfur-galbeed.
Sidoo kale, War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay inay Beesha Caalamku ku bogaadinayso Madaxda Dowladda Somalia, Maamul-goboleedyada xubnaha ka ah, Gobolka Banaadir iyo Wasaaradaha Shirka joogay heshiisyadii ay ka gaareen qorshaha kala-guurka, Wadaagga dakhliga iyo Hanaanka Doorasho ee doorashooyinka qof-iyo-cod ee 2020.
“Dhinacyadaan oo dhan waxaan ku dhiirri-gelinaynaa inay dar-dar-geliyaan hirgelinta heshiisyadaas. In loo midoobo arrimahan iyo kuwo kale oo masiiri ah waxay dhidibada uu aasaysaa horumar dheeraad ah, oo uu ka mid yihiin dhamaystirka geeddi-socodka dib-u-eegista Dastuurka Somalia iyo Qeexidda Hannaanka Federaalka Somalia, loona diyaar-garoobo Madasha Is-kaashiga Somalia oo wax-ku-ool ah, taas oo Dowladda Federaalka Somalia, Midowga Yurub iyo Sweden ay wadajir ugu martigelinayaan magaalada Brussels 25-ka iyo 26-ka Juun.”
Ugu dambeyn, Qoraalka Saaxiiba Somalia ayaa lagu xusay in Maadaama Soomaaliya ay gelayso weji cusub ee xiriirka ay la leedahay Hay’adaha maaliyadeed ee caalamiga ah inay ku dhiiri-gelinayaan madaxda Somalia inay sii wadaan ku-shaqaynta dareen midnimo.